Imithombo yeendaba iyasilela kuba kusilela ukholo kuyo | Martech Zone
Imithombo yeendaba ayiphumeleli kuba kusilela ukholo kuzo
NgoLwesine, Meyi 1, 2014 NgoLwesihlanu, Meyi 2, 2014 Douglas Karr
Izolo bendinencoko emnandi kunye UBrad Shoemaker, Ingcali yemidiya yendawo enembali ende izama ukutsala irediyo kwixesha ledijithali. Kwenzekile ukuba omnye umhlobo, URichard Sickels, ndingene eofisini. URichard wayenembali entle kwirediyo. Sithethile ngetoni malunga nomzi-mveliso kanomathotholo kwaye ndiye ndaqhubeka nokucinga ngawo phezolo.
As ukuthengisa umoya Iyaqhubeka ukwehla kwaye ubukhosi bukanomathotholo buqhubeka nokudibanisa nokudibanisa, ikhomba ingxaki kwingcambu yemithombo yeendaba zemveli… abasakholelwa kwiziqu zabo. Ndiyakholelwa ukuba yingxaki efanayo namaphephandaba kunye nomabonwakude ngokunjalo. Endaweni yokwenza ubuqu, ukwahlulahlula, ukwamkela itekhnoloji yasekhaya neyasentlalweni… la mashishini aqhubeka nokuhamba kwelinye icala. Oku kudala umgama phakathi komthombo wolwazi kunye nabaphulaphuli abazama ukunxibelelana nayo.
Ukudityaniswa kunye nokudityaniswa kwamabinzana amakhulu ekubambeni kwilizwe loshishino. Ziyafana nokonga iindleko. Ukuba ubeka italente yakho embindini kwaye wandise ukufikelela kwayo, kusengqiqweni kuphela ukuba unciphise iindleko zokuveliswa komxholo. Izikhululo zikanomathotholo zidibanisa iinkwenkwezi zesizwe kwaye zishiya izitishi zazo zingenanto Amaphephandaba ayaqhubeka nokutyhala amanqaku e-Associated Press kunye nokunciphisa abasebenzi balapha. Izikhululo zikamabonwakude ziyaqhubeka nokuthengisa italente kwiimarike kwaye ingeniso igcwele.
Kungenxa yokuba abasakholelwa kwiitalente zabo. Ukuba imithombo yeendaba kwezentlalo kunye nokubhloga kusifundise nantoni na, yeyokuba imfuno yokwahluka, okwenzelwe umntu, ukwahlulahlulwa, umxholo onomdla uyenyuka, kunganciphi. Abantu bafuna ulwazi oluthe kratya, hayi kancinci, malunga nobomi babo, izinto abazithandayo, amashishini abo kunye norhulumente wabo. Amajelo osasazo ekuhlaleni awakhange anyuke ngenxa yetekhnoloji, benyuka ngenxa yokuba bekholelwa kubo.
Sukujonga phambili kunayo nayiphi na indawo yemidiya yemveli kwaye ikwayinto efanayo yakudala… isikhewu somxholo onamathele embindini wolwandle wentengiso ephazamisayo. Ukupapashwa okungakumbi kuthetha ilungelo elingaphezulu kwengeniso? Ayilunganga. Bahlutha owona mxholo siwuxabise kakhulu. Kwaye ngoku ixabiso lomxholo ophakathi abawabonisayo likokwehla. Kwakhona… hayi ngenxa yokuphakathi, kodwa ngenxa yokuthanda kwelizwi elingasemva kwayo.
Izikhululo zoonomathotholo, ngokukodwa, ziingcali zomgangatho weaudio, ukonwaba kunye nokufikelela komntu. Kutheni beqhubeka ukugxila ukuthengisa umoya ngaphandle kwe ukuthengisa ilizwi ingaphaya kwam. Kuya kufuneka ndibenakho ukuhamba nakwesiphi na isikhululo sikanomathotholo kwaye ndibone amaxabiso abo okunceda amashishini ukuba enze iinkqubo zabo zokumamela, ahambise le nkqubo ngokusebenzisa iifowuni kunye nokusetyenziswa kwewebhu, kunye nokuqhuba ingeniso kumashishini abo ngokuchonga, ukujolisa kunye nokufikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo. Imiboniso ayifuni nokuba iqhubeke kumaza omoya! Umphakathi akanamsebenzi… yinkolelo enomdla kwilizwi eliviweyo elibalulekileyo.
Andiqinisekanga ukuba likho ithemba kumaphephandaba-iziseko zophuhliso eziyimfuneko ukuze kuqhubeke ukuprintwa kwimithi efileyo kunye nokusasaza oko kubiza kakhulu. Kuya kufuneka belahle oomatshini bokushicilela kwaye batyale imali yabo kwiitalente zalapha ekhaya ukuze baphinde bafake ixabiso kushishino lwabo olufileyo. Umabonwakude ubonakala inguye kuphela onethemba… ukwamkela intlalo nokutyhala isiko labo elimangalisayo ngokusebenzisa ii-interwebs ukuya kubaphulaphuli abalambileyo abalindileyo. Ndingathanda ukubabona bevula iingcango kumashishini nakubathengi abanqwenela ukusebenzisa ividiyo, ngaphandle kweempawu zomnxeba, ukuvelisa, ukuhambisa nokwenza imali ngeevidiyo zabo.
Ndiyayithanda imithombo yeendaba zemveli kwaye ndiyaqhubeka nokukholelwa kumandla abantu abalandela ngalinye lala majoni. Ndinqwenela ukuba bakholelwe kwiziqu zabo.
Phawula: Ndiyafunda I-Eulogy ye-Twitter ekwehleni kokunxibelelana kwe-Twitter. Ngelishwa, ndabona ukukhutshwa kweendaba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ezathi zafaka ii-Twitter's ukukhula… Abanye abasebenzisi abazizigidi ezili-14. Ndiyoyika ukuba i-Twitter inokulandela ekhondweni leendaba zemveli, kugxilwe kuyo amashiya endaweni yomgangatho wolwazi olunikezelayo. Andinathemba lokuba… kodwa siza kubona.
tags: Kholelwakublogaphe phandabaunomathotholoImidiya yokuncokolakumabonakude
UngaluThintela njani uLwaphulo lweDatha kule-Omni-Channel yeHlabathi